Izinto eziyi-10 okufanele uzicabangele lapho ukhetha umshini wokusika we-plasma
Umshini wokushisela we-ARC
Umshini wokushisela we-TIG
MIG umshini Welding
SIKA umsiki we-plasma
Okucwilisiwe ARC Welding umshini
Umshini wokusika we-Plasmaingenye yezindlela ezinhle kakhulu zokusika insimbi, insimbi engagqwali, ithusi ne-aluminium. Ungasika insimbi ngokushesha nangokunembile ngoba iyasha ngensimbi ye-plasma. Ekukhetheni umshini wokusika we-plasma ofanele, sibhale umhlahlandlela wezinto eziyi-10. Uma unentshisekelo yokuthenga ukusikeka kwensimbi, hlola isitolo sensimbi eku-inthanethi. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngomshini wokusika we-plasma, sicela uhlole Umhlahlandlela womthengi womshini wokusika we-plasma.
1. Isiguquli somoya
Umshini wokusika wePlasma udinga umoya ocindezelweyo ukukhiqiza i-plasma, enganikezwa nge-compressor eyakhelwe ngaphakathi noma ukunikezwa komoya okucindezelwe kwangaphandle. Zombili lezi zinhlobo zisebenza kahle, kepha lapho ukhetha umsiki we-plasma, udinga ukunquma ukuthi iyiphi elula kakhulu kuwe. I-compressor eyakhelwe ngaphakathi ibiza kakhulu, kepha lokho kusho ukuthi ungaphatha umsebenzi omncane ngokushesha.
Lapho ukhetha umshini wokusika we-plasma, umshini owufunayo usezingeni eliphakeme futhi uzokuma ukuhlolwa kwesikhathi. Imishini yokusika i-Plasma ayibizi, ngakho-ke qiniseka ukuthi okuthengayo kuqinile futhi akuphuli lapho wenza okuthile okubalulekile. Khetha kubathengisi abathembekile. IHypertherm, iMiller, iLincoln kanye ne-ESAB konke kuyatholakala esiteshini segesi iBaker
3. I-arc yobukhulu
I-pilot arc isici sokusika esihlinzeka nge-arc ezinzile ngempilo ende engasetshenziswa, ngoba ungasika insimbi ngaphandle kwethiphu lesimbi lesiteleka. Lokhu kuyasiza uma usika insizakalo yokugqwala ngoba awudingi ukuhlanza insimbi bese uyishaya. Lokhu okusha okusha, noma kunjalo, imishini eminingi yokusika i-plasma inalesi sici, ngaphandle kwamamodeli ashibhile.
Kunezinketho ezintathu zamandla kagesi, umshini wokusika we-plasmakungathengwa. Ungathenga ama-115V, 230V noma amathuluzi we-voltage amabili. Umshini wokusika i-plasma we-115V ulusizo kubaqalayo abangadingi amandla amaningi futhi basike ekhaya. Lezi zixhuma esitolo sakho sasekhaya, kepha azinawo amandla angako. Uma unokufaka okungu-230V, lapho-ke udinga i-generator ukuyisebenzisa. Uma unokhetho olunezinketho ezimbili, ungashintsha kalula ama-plugs ngokuya ngamandla owadingayo nemvelo yakho.
5. Ukwehlisela phansi
Enye yezinto ezibaluleke kakhulu okufanele uzicabangele ukuqina kwensimbi enganqunywa umsiki we-plasma. Cabanga ngobukhulu obukhulu bensimbi ongafuna ukuyisika, bese ukhetha umshini ongasika. Uma unomshuwalense, kungcono ukufaka isicelo sezinga eliphakeme, uma kungenzeka
Kunokwehliswa okuthathu okwehlukile okufanele kubhekwe:
Kukalwe umthamo wokusika: ingasika ukusika kwensimbi engu-10 intshi (IPM) ngomzuzu.
Ukuzisika kwekhwalithi: ukushuba ngejubane eliphansi - lokhu kuzoba insimbi eshisiwe.
Inganqunywa kuze kube sekugcineni. Kuzohamba kancane kakhulu futhi kungahle kungabi ukusika okuhlanzeke kakhulu.
6. Umjikelezo womsebenzi
Umjikelezo womsebenzi usho inani lokusetshenziswa umshini wokusika i-plasma ongawuthwala ngokuqhubekayo. Umjikelezo womsebenzi ophakeme womshini wokusika we-plasma ungasetshenziswa isikhathi eside, umjikelezo womsebenzi wanoma yimuphi umshini uzoncishiswa ngokwanda kwamandla kagesi. Thola amaphesenti aphezulu kunanoma iyiphi indawo enikeziwe ukuthola umjikelezo womsebenzi omuhle kakhulu.
Imishini yokusika i-Plasma ingaba nesisindo esisuka kumakhilogremu angama-20 iye kumakhilogremu ayi-100 futhi isetshenziselwa imishini yezimboni emangelengele. Uma udinga ukuthatha umsiki wakho we-plasma emsebenzini uye emsebenzini, uzofuna okuthile ongakuphatha ngaphandle kokubuyela emuva! Kepha khumbula, imishini elula ayikwazi ukusika insimbi ebanzi njengomsiki weplasma omkhulu, nosindayo.
8. Nciphisa ikhwalithi
Ikhwalithi yokusika isho inhlanzeko nobushelelezi bokusikwa komkhiqizo okuqediwe Umshini wokusika i-plasma ohamba phambili unekhwalithi ephezulu yokusika, ngakho-ke ukusika kuzovela kubukhali futhi kuhlanzeke, futhi ngeke udinga ukuchitha isikhathi ukuyihlanza ukuze ibukeke kahle.
Izinga lokusetshenziswa komshini wokusika i-plasma lehluka kakhulu phakathi kwemishini ehlukene kanye nezinto ezisetshenziswayo. Funda izinga lokusetshenziswa ledivayisi yakho ukonga imali ngokuhamba kwesikhathi. Imishini yokusika i-plasma eshisayo iyabiza, kepha inezindleko zokusebenza eziphansi, futhi ngenxa yokudla kwayo okuhle kakhulu, ingakongela imali ekusebenzeni kwesikhathi eside.
10. Ukusika ithoshi
Ubude be-flare ukucatshangelwa okubalulekile. Uma usebenza eshabhu elikhulu elinemishini esindayo, uzodinga ithoshi elide ukuze ukwazi ukusebenza ezindaweni ezahlukahlukene ngaphandle kokuhambisa umsiki we-plasma osindayo. Uma uzosika isikhathi eside, bheka i-flashlight elingana nokuma kwesandla sakho ukusiza ukuvimbela ubuhlungu.
Okuningi ngo-andeli group Co., ltd
© Copyright -2020 - 2022 Ukwesekwa kwezobuchwepheshe: